Soomaaliya waxay dib ugu noqotay saliida iyo gaaska - Amjambo Africa
Soomaaliya waxay dib ugu noqotay saliida iyo gaaska
Waxaa qoray Damascene
Kadib ku dhawaad 50 sano oo dagaalo hubaysan iyo dagaalo sokeeye, ayaa dhawaan waxaa socda dhaqdhaqaaq dib loogu dhisayo awooda dowlada, oo ay weheliso kordhin caalami ah. dadaalada nabad ilaalinta ee gobolka, waxay xasilloonidarro ku soo celiyeen Soomaaliya. Ka faa iideysiga xasilloonidooda cusub, waddanku wuxuu baarayaa soo saarista saliida iyo gaaska badda waxayna raadinayaan inay soo jiitaan maalgashi shisheeye, sida laga soo xigtay offshore-technology.com. Websaydhka ayaa soo sheegaya in Soomaaliya ay ka mid tahay dhulal dhowr ah oo ka haray adduunka oo leh awood ay ku heli karaan kheyraadka aan cidna ka faa’iideysan.
Bishii Meey, Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya waxay ku dhawaaqday inay dalbaneyso ruqsad siinta xeebaha laga bilaabo bisha Ogosto 2020. Tani waxay ku saleysan tahay mala awaal ah in, marka la eego jiritaanka juquraafi ahaan ay u leedahay Yemen oo hodanka ku ah saliida, Soomaaliya ayaa sidoo kale hodan ku ah saliida iyo gaaska.
Xukuumadda ayaa Ansixisay sharci batrool oo cusub, kaas oo dhidibada u taagay Shirkadda Qaranka ee Shidaalka Soomaaliya. Kahor xasuuqii sokeeye ee sokeeye ee bilaawday 1960-yadii, wadanka waxaa lagu maalgaliyay qoditaanka saliida dhanka badaha iyadoo lala kaashanayo shirkadaha sida ExxonMobil, BP, Texaco, iyo Shell. Shirkadahaani waxay rajeynayaan inay helaan wax la wadaago Soomaaliya qarnigii 21aad isla markaana kobciya fikirka cusub ee sahaminta. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jirto horumarka dhaqaale ee Soomaaliya, khubaradu waxay u arkaan caqabado hor yaalla. Soomaaliya waxay ku taal geeska Afrika, waxayna deris la tahay Kenya iyo Itoobiya, iyo sidoo kale Yemen oo aan degganayn oo keliya Gacanka Cadmeed. Iyo in dhammaan dhinacyada aysan fiirinaynin xiisaha dib u soo cusbooneysiinta ee saliida iyo gaaska – Soomaaliya waxay wajaheysaa dib u dhac ku yimaada Puntland iyo Jubbaland.
Intaas waxaa sii dheer, Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku muransan xadka badda. Dhanka caqabadaha kale, COVID-19 ayaa hoos u dhigay meheradda, halka Soomaaliya ay wajahayso kiisaska sii kordhaya ee COVID-19. Kooxda Al-shabaab oo ah urur miliishiyo ah ayaa ka hawlgala Soomaaliya waxayna dileen dad badan.
PreviousAfrika iyo COVID-19 dagalki lagula jiray. Cusbooneysiinta qaar ka mid ah qaaradda.
NextWaxbarashada caruurtu waa maalgashiga ugu muhiimsan ee aan samayn karno